देशको विविधताले सङ्घीयताको माग गरेको हो : मन्त्री त्रिपाठी – ostake
काठमाडौँ, १ असोज : मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपश्चात् अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । पुरानोबाट नयाँ प्रणाली जाँदा केही समस्या जरुर उब्जिएका छन् तर, सबै तह र तप्काका नागरिकमा संविधानप्रति अपनत्व जगाउने अभ्यास जारी छ । एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अहिलेसम्मको स्थितिलाई समीक्षा गर्दै विरक्त हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ निजामती सेवा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुनेमा आशावादी देखिनुहुन्छ । राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा मात्रै हेर्न पुग्दा समस्या उब्जिएको ठान्नुहुने मन्त्री त्रिपाठीसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा रासस समाचारदाता नारायण ढुङ्गानाले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौं । त्यसबेला स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भइसकेको थिएन । त्यसले केही द्विविधा आयो । सबै स्थानीय तहले आफू अनुकूल कर लगाउन खोज्दा केही विकृति विसङ्गति देखाप¥यो । समाजलाई केही अपच हुने जस्ता कुराहरु पहिलो कालखण्डमा देखा परेका हुन् । तर ती सबै करीव करीव समाधान भइसकेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ तर, अधिकार क्षेत्र र स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विवाद कायमै छ । प्रदेशले मुद्दा हाल्ने अवस्था आउनुले
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरेको दशाउँदैन र ?
– अहिले हामी समायोजनको चरणमा छैनौँ । एक किसिमले भन्ने हो भने सैद्धान्तिक रुपले समाधान भइसकेको छ । समायोजनका केही अप्ठ्यारा सामना गरिरहेका छौँ । क्रमशः मन्त्रालय समाधान गर्नेतर्फ गइरहेको छ । कर्मचारी पनि व्यक्ति हुन्, चन्दा पुरस्कारबाट नभई लोकसेवा दिएरै आएका हुन् । उनीहरुसँग गरिएको व्यवहार, कार्यविभाजन, पदस्थापनमा समायोजनले केही ठाउँमा चुनौती सिर्जना गराइदिएको पक्कै हो । यो सवाल समाधानतर्फ उन्मुख छ । समायोजन हुनुपूर्व केन्द्रमा रहेका २६ हजार ७७३ कर्मचारीले सबै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए । समायोजनमा लैजाँदा ४९ हजार कर्मचारी सङ्घमा मात्रै थुपारेर राख्यौँ । त्यसकारण कर्मचारी प्रशासनको बनौटमा कहीँ न कहीँ पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशका लागि आवश्यक प्राविधिक र गैरप्राविधिक कर्मचारीको सन्तुलन र आवश्यकताको विषयमा गम्भीरपूर्वक सोचिएको छैन । अझै प्राविधिक कर्मचारी अत्यन्तै कम छ जसको अभावमा हाम्रो विकास प्रक्रिया सही ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन ।
कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन अभावको कुरा गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
पैसा नदिई काम नै हुँदेन भन्ने कुरा बेलाबलामा आइरहेका छन्, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
– प्रदेश प्रहरी कानून निर्माण भइसकेको छ । त्यससँग सम्बन्धित समितिमा सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रश्न के हो भने केन्द्रीयताबाट सङ्घीयतामा गएको हुनाले केही समय अहिलेकै प्रहरी प्रशासनमा रहेकाबाट नै काम चल्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरुको आफ्नै संरचना निर्माण हुँदैन । हाम्रो संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो संरचना निर्माण नभएसम्म सङ्क्रमणकालमा यस्ता समस्या देखापर्छन् । त्यो क्रममा एक ढङ्गले राज्यका ती अङ्गहरु प्रवेश गरिरहेका पनि छन् । अधिकारको कुरामा संविधानले नै उल्लेख गरिसकेको छ, त्यही नै बाँडफाँड गर्ने न हो । (रासस)